Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0712 lar
Fiarovan-doha sy sabatra
Alarobia 14 Nov.
Azo heverina fa nalaina avy tao amin’ny Isa. 59: 17 io fiarovan-dohan’ny famonjena ao amin’ny Efes. 6:17 io na dia hafa aza ny tontolon-kevitra ampiasan’i Paoly azy eto. Ao amin’ny Isa. 59:17, dia Andriamanitra no mitondra eny amin’ny lohany ny fiarovan-doha famonjena, ary ao amin’ny Efesianina kosa, dia ny Kristianina no antsoina handray izany. Mety ho natao teo anoloan’ny miaramila ireo fitaovana hafa voaresaka teo aloha ka izy no mandray izany, ny fiarovan-doha kosa anefa natolotra azy. Angamba natao hanantitranterana indrindra indrindra ny “maha-fanomezana” tanteraka ny famonjena no nanaovana izany.
Miresaka ny amin’ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha i Paoly ao amin’ny 1 Tes. 5:8. Ny famonjena fotsiny ihany anefa no nanoharana ny fiarovan-doha ao amin’ny Efes. 6:17. Ahoana no fomba hanazavan’io fiovana io ny maha-fitaovam-piadiana fiarovan-tena ny famonjena?
Ny famonjena ao amin’ny Testamenta Vaovao dia fanandramana ankehitriny izay hiafara any amin’ny mandrakizay amin’ny alalan’ny fanafahana amin’ireo karazam-paharatsiana rehetra. Ny fiarovan-dohan’ny fandresena eny amin’Andriamanitra (Isa. 59:17) no atolotra ny mpino ho fiarovany azy. Koa satria ny tena zava-kendren’ny devoly farany eo amin’ny fanafihana ataony, dia ny tsy hahazoan’ny Kristianina ny famonjena, dia manjary fitaovam-piadiana mahery vaika ho an’ny Kristianina eo amin’izany tolona izany ny fahazoany antoka ny famonjena, izay atolotra azy ireo ivelan’ny ezaka ataony. Azon’ny mpino atao tsara eo amin’izay mety ho tolona ara-panahy rehetra ataony ny manambara miaraka amin’ny mpanao salamo hoe: “Jehovah Tompo ô, ry Herin’ny famonjena ahy, manarona ny lohako amin’ny andro fiadiana Hianao” - Sal. 140:7.
Rehefa avy niresaka ny amin’ny fiarovan-tenan’ny famonjena i Paoly, dia miresaka ny amin’ny “sabatry ny Fanahy”, izay tsy inona fa ny Tenin’Andriamanitra. Ampitahao amin’ny Heb. 4:12 io andininy io. Inona no fahamarinana lehibe ampitain’ireo andininy ireo, indrindra indrindra eo amin’ny tontolon-kevitry ny ady atao amin’i Satana?
Ny nakana fanahy an’i Kristy araka ny voalaza ao amin’ny Mat. 4:1-10 no fanehoana kanto indrindra ny maha-fitaovam-piadiana mahomby ny Tenin’Andriamanitra. Tokony hampirisika ny Kristianina ihany koo io andalan-teny io mba hifikiran’izy ireo amin’ireo fahamarinana voambara ao amin’ny Tenin’Andriamanitra.
Hery maro be tokoa no miezaka handemy ny fitokisantsika amin’ny Baiboly. Inona avy ny sasantsasany amin’ireo hery ireo eo amin’ny fiaraha-monina misy anao, fiangonana, na koa kolontsaina? Ahoana àry no hiarovanao tena amin’izany fampihenana ny fitokisanao amin’ny Tenin’Andriamanitra izany (izay matetika no misoko mangina tsy tsikaritra akory)?